Ny kinova vaovao amin'ny Wear OS dia ho tonga amin'ny ankamaroan'ny famantaranandro | Androidsis
Omaly dia naseho ny kinova vaovao an'ny Wear OS. Ny rafitra fiasa vaovao ho an'ny famantaranandro dia havaozina amin'ny volana ambony miaraka amina endrika vaovao. Avy eo dia naneho hevitra fa ny fanavaozana ny mpampiasa dia antenaina hanomboka amin'ny volana septambra, na dia tsy voalaza aza ireo maodely afaka manavao. Soa ihany fa efa tonga aty amintsika amin'ny fomba ofisialy ity vaovao ity.
Ary misy vaovao tsara, satria ny ankamaroan'ny famantaranandro dia hanavao ilay kinova Wear OS vaovao. Famantaranandro dimy ihany no tsy hahazo ilay fanavaozana. Ka ny ankamaroan'ny mpampiasa dia afaka mankafy an'ity kinova ity.
Lava loatra ilay lisitra, noho izany dia nanapa-kevitra i Google ny hilaza mivantana ireo maodely izay tsy havaozina, ankoatry ny fanambarana ny antony tsy hanavaozan'izy ireo. Nilaza izy ireo fa ny famantaranandro izay tsy mifanaraka amin'ny Android Wear 2.0 dia tsy hanana ny fanavaozana. Ary amin'ny fitambarany dia misy maodely dimy: LG G Watch, Samsung Gear Live, Moto 360 v1 (2014), Sony Smartwatch 3 ary Asus ZenWatch v1.
Ny sisa amin'ny famantaranandro izay nifanaraka na nanana Android Wear 2.0 na efa manana ny andiany voalohany an'ny Wear OS dia mifanaraka. Amin'izay mba manomboka amin'ny volana ambony dia hahazo ity fanavaozana ity ianao. Na dia mbola tsy ampy aza ny daty manokana momba an'io.
Ny ampahany tsara amin'izany dia ny fahitantsika ny fiambenana rehetra amin'ny tsena Android azo atao ny manavao ity Wear OS nohavaozina ity. Ka ho an'ny mpampiasa maro, ny fanovana interface dia ho tsikaritrao, na amin'ny fomba tsara aza.
Mandritra izany fotoana izany, tsy ny Wear OS irery no zava-baovao amin'ny tsenan'ny smartwatch izay handao antsika i Google mandritra ireo herinandro ho avy. Fanamafisana fa mbola miandry ny orinasa amerikana hanolotra ny famantaranandrony voalohany, ny Pixel Watch, amin'ny Oktobra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Tutorials » Android Version » Ny ankamaroan'ny famantaranandro dia hanavao ilay kinova Wear OS vaovao